Vaovao - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
There are maro and varied uses for threaded rod, and primarily, it is efa nampiasaina in commercial construction, where threaded hazo are cut ny required halavan'ny and efa nampiasaina ny suspend electrical conduit, pipes for plumbing, HVAC ductwork, and sprinkler pipes for fire protection.
Heavy Duty Clamps fampiharana ary instructions
Pipe clamps are suitable for the manamboatra of mazava, antonony-lanja and heavy sodinalines nanao avy amin'ny different akora. Wenap tolotra the suitable sodina clamps with and without sound insulation inserts for the optimum manamboatra of sodina diameters avy amin'ny 8 to 508 mm, for different thread shapes and for diverse sodinaline media.
Inona no fomba fitazonana fitaovam-pandaminana vita amin'ny jiro fingon-jiro?
Fanitsiana sy fanamafisam-peo
2018 Manamafy ny Shina i International